In kastoo ay u muuqato waa quruxsan fudud si ay u gudbiyaan barnaamijyadooda u dhexeeya iPhone iyo Lugood, macaamiisha aan geek inta badan la kulmaan dhibaato. Dad badan ayaa su'aalaha "sida in ay barnaamijyadooda ka iPhone wareejiyo Lugood tan iyo markii aan u baahan yihiin in gurmad iyaga" iyo "sida loo barnaamijyadooda ka Lugood wareejiyo iPhone halka hayn amarka app iyo qaabka on my iPhone" ayuu weydiiyay. Maqaalkani waxa uu daboolayaa 3 qaybood, rajeynaya waxaad ka heli kartaa xalka la xiriira in ay barnaamijyadooda u dhexeeya iPhone iyo Lugood halkan ka wareejinta,
Qaybta 1. Sidee si ay u gudbiyaan Apps ka iPhone in Lugood
Qaybta 2. Sidee si ay u gudbiyaan Apps ka Lugood si iPhone
Qaybta 3. Sida loo Isticmaalo Folder ama New Pages in Maamul iPhone Apps
By raaceen jidkii hoose, Apps aad iibsatay ka iPhone la ID Apple aad waxaa loo wareejin doonaa Maktabadda Lugood ah. Waa mid aad u fudud. Dabcan, sidan ka sokow, waxa kale oo aad isticmaali kartaa Wi-Fi in ay barnaamijyadooda ka iPhone wareejiyo Library Lugood marka ay ku xiran isla Wi-Fi. Gujinaya aad iPhone oo waxaa jira sanduuq wada hadal "hagaagsan oo iPhone taliya Wi-Fi" a. Waxaa Riix in ay barnaamijyadooda ka iPhone wareejiyo Lugood aad ka weyn tahay Wi-Fi. Si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah info, fadlan riix halkan >>
Fiiro gaar ah: Dadka qaarkood ayaa ka cabanaya inaysan dib markii barnaamijyadooda ka iPhone gudbaayo Lugood, khariidad-ada iyo si la beddelo. Haa way tahay. Laakiin waxaad ka baxsan kartaa codsanaya isbedelada in aad iPhone. Markii ugu soo socda marka aad u hagaagsan barnaamijyadooda ka Lugood Library in aad iPhone, hubi ikhtiyaarka u hagaagsan. Si kastaba ha ahaatee, marka syncing bilaabmin, guji ka bixi button "x" ku bar xaaladda.
Tallaabada 1. Lugood Launch iyo riix "Store" menu dusheeda. Saxiix in la ID Apple, kuwaas oo aad loo isticmaalaa in lagu soo bixi barnaamijyadooda ku saabsan iPhone.
Tallaabada 2. Click "Store" menu mar kale iyo dooro "ogolaato Computer Tani". Kaliya ka dib markii oggolaanaya computer this, aad awoodaan in ay barnaamijyadooda ka iPhone wareejiyo Library Lugood ah.
Tallaabada 3. Isku aad iPhone la computer via USB ah cable iPhone aad. Guji "View"> "Show galeeysid". Laga soo bilaabo halkan, waxa aad ka arki kartaa iPhone "AALADAHA" dureeri.
Tallaabada 4. Xuquuqda guji aad iPhone on galeeysid ee Lugood aad. Laga soo bilaabo liiska hoos-hoos u, dooro "Iibsasho Transfer".
Tallaabada 1. Daahfurka Lugood on your computer. Guji "View" menu dooro "Show galeeysid". Ka dibna waxaad arki kartaa dhammaan waxyaabaha soo bandhigay dhinaca bidix ee aad Lugood Library.
Tallaabada 2. Isticmaal USB ah cable iPhone in ay ku xidhmaan aad iPhone la your computer. Haddii aad ku xiran aan si guul leh, waxa aad ka arki kartaa iPhone soo bandhigay aagga AALADAHA.
Tallaabada 3. Ka hor inta barnaamijyadooda ka Lugood gudbaayo iPhone, furmo Falanqeynta Lugood, in aad meelaha la doonayo jiidi karaan barnaamijyadooda ama u guuraan mid app in kale si ay u abuuraan gal u ah. (Ikhtiyaar)
Tallaabada 4. Riix "codso" laga bilaabi karo habka ee Chine dayanayaan ka Lugood aad si aad iPhone. Dhinaca midig ee Lugood, waxaad ka arki kartaa bar xaaladda.
Qaybta 3. Sida loo Isticmaalo Folder ama New Pages in Maamul Apps on iPhone
Haddii ay jiraan barnaamijyadooda badan oo ku saabsan iPhone, waa in aad u baahan tahay si ay u kala soocaan oo u maareyn in qaybood. On aad iPhone, waxaad samayn kartaa fayl ama bog cusub oo ay ku meel-ada kuwaas. Hoos waxaa ku qoran sida.
1. In la abuuro fayl iyo saar Apps in:
Ugu screen guriga aad iPhone, aad halkan ka arki kartaa qayb ka mid ah barnaamijyadooda. Tubada mid app icon ilaa dhan barnaamijyadooda ruxaya. Tubada mid app oo u guuraan app kale oo aad u wada geliyey. Markaas gal ah loo abuuray, 2-ada. Magac Nooca u gal. Ka dibna waxaad jiidi karaan barnaamijyadooda kale oo ka tirsan this category in galkan.
2. dhaqaaq Apps in New Pages:
Waxad abuuri kartaa bogagga kala duwan si ay u maareeyaan barnaamijyadooda. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa in jiidi oo hoos u barnaamijyadooda bogga icon ku saabsan iPhone.
Nidaameed wax kasta oo iPhone
Xogta laga iPhone wareejiyo Mac
Faylal ay ka dhaqaaq BlackBerry si iPhone
Xogta laga iPhone wareejiyo PC
Best iPhone Software Transfer Waxaad u
Back Up iPhone in PC
Jailbreak iPhone 4s carar macruufka 7
Top 3 Lugood Hurdada Saacad
Tag Editor Bilaashka ah ee Lugood - MusicBrainz Picard
> Resource > Lugood > Sidee si ay u gudbiyaan Apps ka iPhone in Lugood & ka Lugood si iPhone